Iindaba-Thelekisa ukuthengiswa kweendlela zokwenza imveliso kwiShishini leBOPET
Thelekisa indlela yeenkqubo zokwenza imveliso kwi-BOPET
Okwangoku, kukho iindlela ezi-2 ezahlukeneyo zemveliso kwimveliso ye-BOPET, enye yinkqubo yokwenza izinto, enye iyanyibilika ngokuthe ngqo.
Ngaphambi kowama-2013, intengiso yayihlala ikakhulu isekwe kwinkqubo yokulungisa, ngelixa emva kuka-2013, inkqubo yokuhambisa umhlambi yaziswa. Ngokwezibalo zikaZhuo Chuang, ukuphela kukaSeptemba ngo-2019, inani elipheleleyo lemveliso yeBOPET e-China yayizigidi ezi-3.17 zeetoni, kunye nomgangatho wokuveliswa kwezixhobo zokudityaniswa ngokuthe ngqo zibalelwa kwiipesenti ezingama-30 zomthamo opheleleyo wokuvelisa, kunye ezingama-60 ezeleyo Iipesenti zomthamo wokuvelisa izixhobo zokomisa.
Hayi. Ngqo kumgca wokunyibilika
IzakhonoIitoni / unyaka
Ixabiso lenkqubo yokwenza isilayi liphantsi kunelo lokunyibilika ngokuthe ngqo, malunga ne-500 yuan ngetoni nganye. Ke, inenzuzo eyomeleleyo kwicandelo lefilimu ngokubanzi. Okwangoku, amashishini amathathu aphambili kushishino anezixhobo ezine zokunyanzeliswa komthetho, iJiangsu Xingye, i-Yingkou Kanghui ngabaxhasi abaphezulu be-3 kumzi mveliso we-BOPET e China, kwaye isabelo sentengiso sefilimu esiqhelekileyo siliqela. Ngokuvelisa kwe-Ningbo Jinyuan, Fujian Baihong, Zhejiang Yongsheng kunye noShuyang Genzon bazibandakanya nomzi mveliso, kuye kwenziwa iphethini entsha yokhuphiswano kwicandelo le-BOPET, kodwa inzuzo iyonke icacisa ukhuphiswano icacile ngakumbi kunendlela yokwenza isilayi.
Zombini izibonelelo kunye nokungalunganga kwiinkqubo ezimbini. Nangona inzuzo yokunyibilika ngokuthe ngqo kumhlaba wefilimu ngokubanzi ingcono, umgca wenkqubo yokwenza isilayi uneengenelo ezibonakalayo ngokubhekiselele kwinkqubo yokuvelisa kunye nokuceba kwemveliso. Okwangoku, imakethi ye-BOPET kumgca ochanekileyo wokunyibilika komgca wokuvelisa umdibaniso wefilimu, ngesiqhelo iimveliso zefilimu iThin BOPET zisetyenziswa kakhulu kwicandelo lokupakisha ngokubanzi. Yinxalenye yobukhulu kuphela enokusetyenziswa kwicandelo le-elektroniki. Nangona kunjalo, umgca wokuvelisa wenkqubo yokwenza isilayi ngumgca wokuveliswa kwefilimu emnyama. Ukongeza kokupakisha okuqhelekileyo, inokusetyenziswa kwicandelo lamashishini ombane kunye nawombane, amasimi okwakha nawokwenza isicelo aninzi kakhulu, kwaye amaqela abathengi anamandla ngakumbi.
Ngokuphuculwa komgca wemveliso yeBOPET kunye nophuculo lweteknoloji, izixhobo ezinyibilikisiweyo zinganakho ukuvelisa ngakumbi nangaphezulu iimveliso phantsi kwesakhiwo sokwehliswa kweendleko. Ngo-2005, ngokuhlaziywa kwetekhnoloji, iFujian Baihong inokunyusa ubukhulu beemveliso ukusuka kwi-75μ ukuya kwi-125μ. Izixhobo ezitsha zisacwangciselwe ixesha elizayo. Ngeli xesha, uya kukwazi ukuvelisa iimveliso ngobukhulu be-250μ kunye ne-300μ. Eli linyathelo lokuzivelela kwezinto. Ukongeza, umgca wemveliso yeBOPET ukwazile ukufikelela kuphuhliso lwe-leapfog malunga nobubanzi: Ukusuka kwi-3.2 yeemitha ukuya kwi-8.7 yeemitha ukuya kwi-10.4 yeemitha. I-China BOPET yentengiso yinxalenye yesicwangciso sokugqibela ngomhla we-3- 15 we-10.4 m yemveliso, eya kuvuselela ipatheni entsha yomzi mveliso wase-China BOPET.
Ixesha lokuposa: Aug-21-2020
I-Shuyang Genzon Novel Equipment Co, Ltd
Inombolo yomnxeba: 86-0527-83083000